Ntọala nke Ahịa Dị Mma na nke Ọjọọ | Martech Zone
Na Mọnde, Nọmba 11, 2014 Na Mọnde, Nọmba 11, 2014 Douglas Karr
Ọ dị ka amamihe bụ otu n’ime ihe ndị ahụ na-amụghị, ọ na-abịa n’ihe mgbu, ọ joyụ na ahụmịhe ndị ọzọ. Ka m na-eto eto n’ahịa m, achọpụtara m na oge ka m na-etinye oge m na-atụ anya ya, ọ bụ ndị ahịa anyị ka ọ kacha mma ma ọ bụ ka njọ. Ọ bụrụ na m kwuo na m ga - enweta ihe mejupụtara ma ọ ga - ewe ogologo oge karịa ka m chere - atụmanya atụfuru na-akpata nkụda mmụọ. Ọ bụrụ na m kwuo na m ga - enweta ihe mezue ma nye m ọrụ ahụ na mgbakwunye na ọrụ ndị ọzọ bara uru - agara m atụmanya karịa ma onye ahịa ahụ nwere obi ụtọ.
M ka na-ada ada ọtụtụ oge, mana ntọala nke ihe ịga nke ọma m na azụmaahịa dabara na atụmanya m setịpụrụ. Ekwetaghị m na nke ahụ bụ epiphony - mana ekwenyere m na ọ bụ ntọala nke ahịa na azụmaahịa ọ bụla na ntanetị. Isetịpụ atụmanya bụ nnọọ n'okpuru-na-eme atụmatụ. Jiri ikpe, ọmụmụ ihe, ọnụọgụ, mbipụta akụkọ, post, mmelite… ihe niile anyị na-eme bụ maka ihe ihe kacha mma, ọ bụghị banyere ihe ndị ezi uche dị na ha.
N’izu a agara m Florida iji nabata nwa nwanne m nwoke na mbido izizi ya na Ọwara. Achọrọ m nkịta m gbadaa, n'ihi ya anyị kwụsịrị ọtụtụ. N’otu ebe izu ike dị na Florida, ahụrụ m akara ngosi a na-atọ ọchị n’elu urinals.
Nsogbu nke ihe ịrịba ama ahụ, n'ezie, bụ na ka ọ na-ere ahịa akpaaka nke urinal, na smart butt dị ka m, ọ na-enye ozi ahịa dị iche iche n'ụzọ zuru ezu. Ọrụ ahụ, n'ezie, enweghị aka… nke ga-abụ ihe ịtụnanya mana ọ ga-abụ iwu na-akwadoghị.
Anyị ga-akpachara anya maka ahịa anyị tụrụ anya ya. Ọ bụ ezie na ebumnuche anyị nwere ike ịbụ ịgwa ndị agam n’ihu na itinye ego ha n’etu, ọ bụchaghị otu ozi ka anyị ga-agwa ndị na-ege anyị ntị.
Settọ ntọala ndị ziri ezi, nke a ga-enweta na mbọ ị na-agba ga - enyere gị aka ịmata ma mechie ndị ahịa ziri ezi, na - eduga n'ịbawanye njigide na ọnụ ahịa ndị ahịa ka ukwuu. Tọlite ​​atụmanya na-adịghị mma agaghị eme ka ọnụọgụ ọnụọgụ dị elu, ọ nwere ike ibute nyocha adịghị mma na nkata mmekọrịta na ntanetị. Nke a, n'aka nke ya, nwere ike ịchụpụ azụmaahịa nke nwere ike ịbụ ezigbo ndị ahịa.
Ntọala nke ahịa niile bụ isetịpụ atụmanya dị ukwuu. Nnukwu ahia na - eduga mmekọrịta mmekọrịta ndị ahịa, nke na - eduga n’iwulite ezigbo aha na ntanetị… nke na - eduga ọtụtụ ndị ahịa.
Tags: -atụ anyana-akpa ọchịaka-n'efu
Ngwaọrụ 5 ga-eme ka nsonaazụ gị ka mma site na ịde blọgụ
Nọvemba 13, 2014 na 3:38 nke ụtụtụ
Isi ihe ọ bụla i deworo ziri ezi ka mmiri ozuzo.
Ịtọpụta atụmanya ezi uche dị na ya kama ịbụ nke kachasị mma na-adabere na nsonaazụ ya. Ịre ahịa dị mma na nke ọjọọ bụ egwuregwu niile nke ịtọ atụ anya.
M ga-ekwukwa na ihe atụ ị nyere bụ naanị ihe na-akụda mmụọ….LOL
Nọvemba 21, 2014 na 9:24 nke ụtụtụ
Nnukwu akwụkwọ ozi – Agbasawanyela m isiokwu a na blọgụ kacha ọhụrụ. A ga-enwe nkwanye ùgwù ma ọ bụrụ na ị ga-elele ya wee nye m nzaghachi ọ bụla? https://www.linkedin.com/pulse/article/20141121125524-103311141-are-marketers-living-up-to-customer-expectations-this-christmas
Kedu ụzọ ọ bụla, nọgide na-arụ ọrụ nke ọma!